Abu Muhammad al-Masri - Hogaamiyihii Al-Qacida 'ee caawiyey Caydiid oo la dilay' - Caasimada Online
Home Warar Abu Muhammad al-Masri – Hogaamiyihii Al-Qacida ‘ee caawiyey Caydiid oo la dilay’
Tehran (Caasimada Online) – Hoggaamiye ku-xigeenkii Al-Qacida, oo lagu eedeeyey inuu ka dambeeyey weeraradii safaaradaha Mareykanka ee Nairobi iyo Darussalam, sidoo kalena Jeneral Maxamed Faarax Caydiid ka caawiyey dagaalkii uu la galay Mareykanka, ayaa lagu dilay dalka Iran.
Wargeyska New York Times oo soo xiganaya ilo-wareedyo sirdoon ayaa weriyey in Abdullah Ahmed Abdullah oo loo yaaqaan Abu Muhammad al-Masri ay dileen wakiilo ka tirsan sirdoonka Israel, oo fulinaya codsi ka yimid Mareyaknka.
Weerarkan oo ay fuliyeen laba nin oo huebysan oo ku socday mooto ayaa 7-dii August ka dhacay waddo ku taalla magaalada Tehran ee caasimadda Iran, sida lagu sheegay warbixinta New York Times. Waxaa la socday oo lala dilay gabar uu dhalay.
Dilka Al-Masri, oo loo arkayey inuu ahaa ninka beddeli lahaa hoggaamiyaha Al-Qacida Ayman Al-Zawahi ayaa tan iyo markaas la qarinayey, sida ay sheegtay warbixinta New York Times.
Sida lagu sheegay warbixinta New York Times, waxa uu sidoo kale xilligaas u safray Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, isaga oo caawiyey oo tababar siiyey maleeshiyadii daacadda u aheyd Jeneral Maxamed Faarax Caydiid.
Iran ayaa sidoo kale maanta beenisay warbixinta, waxayna sheegtay in aysan jiri “argagixiso” Al-Qacida ah oo ku sugan ciiddeeda.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda Iran Saeed Khatibzadeh ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri “Mareykanka iyo Israel waxay mararka qaar Iran la xiriiriyaan kooxaha noocan ah ayaga oo been sheegaya islamarkaana warbaahinta u dusinaya akhbaaraad been abuur ah, si ay isaga fogeeyaan dhaq-dhaaqayada dambiyeed ee kooxdan iyo kooxaha kale ee argagixisada ee gobolka.”